godparents ၏အခန်းက္ပ - စပွန်ဆာအတွက် Godson များမှာ
ကလေးတစ်ဦးဗတ္တိဇံမတိုင်မီဖြစ်တယ်ဆိုရင်, တကစပွန်ဆာရှာတွေ့ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်သောမိဘများအထူးသဖြင့်အနီးကပ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့မျှော်လင့်ချက်များသို့မဟုတ်ပင်တာဝန်ဝတ္တရားရသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားထို့ကြောင့်မွေးစားမိဘများနဲ့ချိတ်ဆက်ထားသလဲ
ကျနော်တို့ godparents ဖြစ်များမှာ!
အဆိုပါစပွန်ဆာအသင်းတော်၌ဝိညာဏဆက်ဆံရေးမျိုးပေးအပ် 1983 နှစ်တွင်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါစကားလုံးလှုံ့ဆော်မှုလက်တင်မှလာနှင့် "Co-ဖခင်" နဲ့တူတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်။
ပြပွဲရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလှူငွေလက်ဆောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန္ဒသို့မဟုတ်အသက်အဘို့ဂတိတော်အတိုင်းထိုနာမည်များဒီဇိုင်းတစ်ခုသားသမီးရဲ့ကမျြးစာအဖြစ်စေခြင်းငှါ, တအရေးအသားရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောဒေသများရှိကအမြိုးသားအစွန်ပလွံကြမ်းပြင်ကြင်အလှဆင်သည်အသင်းတော်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ပါသည်အုန်းနင်္ဂနွေနေ့ဟာသူတို့ရဲ့စပွန်ဆာဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းဘုံဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏မွေးနေ့များဗတ္တိဇံနှင့်တစ်နှစ်၏ဂတိမှတ်မိဖို့ဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုအကြောင်းပြချက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ယနေ့တွင်မွေးစားမိဘများ၏သက်သက်သာဘာသာရေးထောက်ခံမှု, သို့သော်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနောက်ခံထဲသို့တွန်းချနေသည်
တစ်ဦးဆရာဖွငျ့ဤကလေး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူနှင့်မိဘများဖယ်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအပေါ်ကြောင်းကိုဆန္ဒရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးစပွန်ဆာအထူးအခါသမယအပေါ်ဆုကြေးဇူးကိုမှသက်သက်ကန့်သတ်ထားသည်။
Godparents ယင်းကမကထကလေးနဲ့အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်ရန်နှင့်မိဘများအကြားကသူတို့ရဲ့တိုင်ပင်သို့မဟုတ်ဖျန်ဖြေအဖြစ်ရှိဖို့ကွိုးစားသငျ့တယျ။ မိဘစောင့်ရှောက်မှု၏တာဝန်၏သေမင်း၏အမှု၌ godparents ရှိသည်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်စပွန်ဆာတစ်ဦးအုပ်ထိန်းသူမှမချိတ်ဆက်ရသေးသည်။ မိဘများဆန္ဒရှိလျှင်ဤအလိုတော်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါမွေးစားမိဘများဖို့မျှော်လင့်ချက်များ, အလိုဆန္ဒများနှင့်ကတိကဝတ်ဘာတွေလဲ? ဤသည်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်စိတ်ပျက်ကယ်တင်တော်မူ၏။ အကောင်းဆုံးမှာထိုသူငယ်အကြားယုံကြည်မှု၏ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် Pateနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ရှောက်နိုင်သလား။ မိဘများသူတို့ကိုယ်သူတို့ incidentally နိုင်ပါတယ်မျှ godparents ပေမယ့်အဘိုးအဘွားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမောင်နှမသို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းသောမိတ်ဆွေများကိုမကြာခဏရွေးကောက်တော်မူကြသည်။ ဒါဟာသင်တန်ဖိုးများကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်ပညာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်တည်ဆောက်နိုင်သည်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။